Ny fandehanana manerana an'i Laos , dia tena tokony hijerena zava-mahagaga sy tsy manam-paharoa ao amin'ny saha tsara tarehy speleological. Ny lava-tany ao Laos dia toerana tena mahafinaritra ho an'ny fialantsasatra amin'ny andro andro iainan'ny mponina ao an-toerana, izay manangona ny aloka mangatsiaka eo am-baravarankely.
Ireo zohy tsara indrindra any Laos
Asehoy anay ny soso-kevitrao momba ireo fomban-tany mahaliana indrindra eto amin'ny firenena:
Tohàn'i Tam Chang (Tham Jang na Tham Chang). Any amin'ny faritanin'i Vientiane , any atsimon'ny tanànan'i Vang Vieng izy io. Ny lava-bato dia tarihan'ny tetezana iray eo amoron'ny renirano. Tamin'ny taompolo XIX, Tam Chang dia nampiasaina ho fialofana ho fiarovana ireo fanafihana Shinoa sy fandrobana. Ny haben'ny lava-bato dia tsy lehibe loatra, fa amin'ny alalan'ny lavaka eo amin'ny rindrin'ny vatosokay dia ahitanao ny toetry ny renirano sy ny manodidina. Raiso an-tananao amin'ny fitsangatsanganana ny lamosina, dia azonao atao ny manatri-maso ny hakanton'ny tara-maitso manjopiaka manodidina. Amin'ny lohataona, rehefa tonga any amin'ny lava-drano ny rano ao anaty renirano ary miditra ao anatiny, dia afaka milomano amin'ny sambo 80 m lalina ianao. Ao ambadik'ireo mpitsidika dia misy jiron'ny herinaratra, ary eo am-pototry ny lava-bato dia afaka mahita renirano iray misy rano mangatsiaka mangatsiaka ao amin'ny renirano Wangviang.
Cave Tam Sang (Tham Xang, Elephant Cave). Raha ny marina, ity dia fitambaran-javatra iray manontolo, izay misy lava-bato efatra mifanila aminy, izay antsoina hoe Tam Sang, Tam Khoy, Tam Lu ary Tam Nam. Ireo zohy ireo dia mipetraka 8 km avaratry ny Vang Vieng, akaikin'ny tanànan'i Ban Pakpo. Ny anarana Tam Sang dia midika hoe "lava-elephant", izay azo hazavaina amin'ny endrika stalactites mitovy amin'ny elefanta. Ao anatin'ilay lava-bato dia afaka mahita tsangambato Bouddha maro ianao, ary raha mifindra toerana 3 km ianao dia hanokatra ny farihy ambanin'ny tany ny masonao. Nandritra ny ady ho an'ny fahaleovan-tena, nampiasa ireo lava-bato ireo ny vahoaka Lao mba hisakanana ireo mpiady anaty akata, ary koa ho toy ny hopitaly miaraka amin'ny trano fitrandrahana sy trano fitehirizana fitaovam-piadiana. Voarakitra ho an'ny mpitsidika ity toeram-ponenana ity, fa ny sisa tavela amin'ny hopitaly dia azo jerena amin'ny fitsangatsanganana. Ny fitsidihana an'i Tam Sang dia tsara kokoa amin'ny ora maraina noho ny fahazoana tsara kokoa ny hazavana ny lava-bato.
Fandringanana Paku (Pak Ou, Caverns an'ny an'arivony Bouddhas). Io no toeram-pitrandrahana lava-bato malaza indrindra any Laos, any amin'ny Reniranon'i Mekong. Ny sidina amin'ny Pack Y dia tsy atao afa-tsy amin'ny sambo. Any akaikin'ny vavan'ny renirano no misy ny ambany (Tham Thungung) na Tam Prakachai (Tham Prakachai)) ary ny Upper (Tham Ting) na Tam Leusi (lava-bato). Ao amin'izy ireo dia afaka mahita andian-tsangambato Bouddha hazo ianao, izay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny olona ao an-toerana sy ny mpivahiny. Ny fidirana amin'ny Cave Upper dia voaravaka amin'ny vavahady vita amin'ny sokitra vita amin'ny hazo. Avy amin'izany dia misy tohatra iray mankany Lower, izay tsara tarehy sy manankarena amin'ny fanomezana.
Ny zohy ao Boddha , antsoina koa hoe Tam Pa Pa. Araka ny voalazan'ny moanina Lao, ity dia toerana tsara hisaintsainana sy hahazoana firindrana sy fiadanan-tsaina. Eto dia ahitanao ny fananganana bolongana vita amin'ny bolongana Bouddha sy sora-tanana amin'ny ravina palm. Misy dingana roa ao Tam Pa. Ny maina dia maina, ary ahitana ny sarivongana. Ny farihy ambany dia feno rano, izay namorona ny farihy Nong Pa Fa, izay midika hoe "sokatra ny farihy amin'ny shell mare". Manomboka any an-dohasaha ny fitsangatsanganana ary mandroso hatrany mandra-pahatongan'ny rano, dia afaka milomano eo amin'ny 400 m ianao. Ny fahazavana ao anatin'io zohy io dia voajanahary fotsiny, noho izany dia soso-kevitra ny haka latabatra miaraka aminao, ary koa manao kiraro mahazatra sy akanjo marevaka mba hiarovana amin'ny moka.
The Cave of Tham Khoun Xe. Ao afovoan-tananan'i Laos no misy azy, ary mbola tsy tonga amin'ny mpitsidika. Mahagaga ao amin'ny hatsarany, andian-jatony feno lava-drano feno fitoeran-drano, ary indraindray mahatratra 120 metatra ny haavony ary 200 metatra ny halavany. Ny anaran'i Tam Hong Xue amin'ny dikanteny dia midika hoe "lava-drano eo amin'ny loharanon'ny renirano": Xe Bang Phi dia avy any amin'ny ala mikitroka ary mamakivaky ny vato eny an-toerana amin'ny alàlan'ny andalany. Ao anatin'io lava-bato io dia misy 5 rapids, ny voalohany amin'ireo dia tokony ho 2 km hatrany amin'ny fidirana. Mandritra ilay fitsidihana dia azo atao ny manana ny sambonao manokana, izay ahafahanao mivezivezy amin'ny vato mba handroso, raha tsy izany dia tsy ho vita ny hetsika. Ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra, ny renirano eto dia misy tondra-drano mahery vaika, noho izany dia tsara kokoa ny manakana ny fitsidihana an'i Tam Hong Xue.
Ny lava-bato ao Niakh (Great Cave, Niah Great, Gua Niah). Toerana nahaterahan'ny olona 40 arivo taona lasa izay. Fonenan'ny vorona maro (anisan'izany karazana salangas telo), ary ny mponina ao an-toerana dia manomana lasopy avy amin'ny akany. Misy koa ramanavy. Ny lava-bato lehibe dia misy andalana manan-danja sy fidirana 8 samihafa. Ny iray amin'izy ireo - ny vava Tandrefana - dia tena manan-danja tokoa amin'ny fikarohana ara-dokotera. Ny fitsidihana ny lava-bato ao amin'ny lava-bato Niah dia manomboka amin'ny foibe ao amin'ny valan-javaboary, ary avy eo dia mitohy amin'ny sambon-koditra eny amoron'ilay anarana. Làlana efatra kilaometatra mamakivaky azy no hitondra anao any amin'ny Western Roth. Hahita fialofana ao anaty lava-bato ianao, avy eo manangona toeram-ponenan'ny vorona ary avy eo amin'ny lavaka ao amin'ny vala no mijery ny taratra miditra ao amin'ny Great Cave.
Cave Tam Chom Ong (Tham Chom Ong). Io no faharoa lava indrindra any amin'ireo lava-tany any Laos (13 km mahery ny halavany) ary nomena ny anaran'ny tanàna akaikin'i Ban Chom Ong. Nanokatra an'i Chom Ong tao amin'ny taona 2010 izy ireo, ary ankehitriny dia milaza ny mpikaroka fa tsy ny fomba rehetra nodinihina akory, ary angamba, ny haben'ny lava-bato dia mbola bebe kokoa. Ny fitsangatsanganana dia mandalo ny renirano amin'ny 1600 m.
Tsy ny lisitra manontolo amin'ny lava-tany Laos. Noheverinay fa ireo trano sy trano mora mahaliana indrindra. Misy lava-maro na kely kokoa fantatra kokoa. Anisan'izany ohatra, ny Kao Rao vao haingana hita any avaratry ny firenena. Amin'ny ankapobeny, ny lava-tany any Laos - iray amin'ireo mpitsidika lehibe, izay tsy azo tsinontsinoavina.
Inona no hitondrana an'i Nepal?
Brunei - toetrandro
Fitaterana any Korea Atsimo
Fanjonoana any amin'ireo Maldives
Fitsangatsanganana tany Korea Atsimo
Fitsangatsanganana tany Japon
Beef pilaf - fomba tsara indrindra mahazatra sy mahazatra
Fasan'ny mason'ny MDF
Dress pantalon 2016
Toerana any Quito
Tontolon'ny fanaovana akorandriaka
Pasta amin'ny sòs-boanjo
Ny akanjom-behivavy dia lamaody lamaody
Zolotukh amin'ny olon-dehibe
Inona no havoaka avy any Torkia?
Akanjo vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra
Karazam-baravarankevitry ny fanamboarana
Alika alika goavambe - ny 10 ambony amin'ireo alika lehibe indrindra eran-tany izay mandresy ny habeny rehetra
Nahoana no tratran'ny trondro ao anaty rano?
Bokim-borona - oroka ary ahoana no fomba handikana izany nofy izany?
Ahoana no fomba hamitana ny tranon'ilay trano amin'ny tananao manokana?